Mai Chibwe VekwaZimuto: Pakunovata
Nyaya yokuronga zvokunovata nomurume/mukadzi wako inyaya inosiyanisa vanhu kufunga kwavo zvokuti imi mumba menyu itai zvamunoona kuti munobvumirana. Kune vanhu vakawanda vanoroorana vagoita makore akawanda vari vese asi pasina anoona muviri weumwe wake asina kupfeka. Pano ndoda kumbotaura maitire avanhu vakasiyana mudzimba dzavo. Imi maziva izvi musada kuita samai nababa nhingi asi itai zvenyu zvinokugarisai zvakanaka muri vaviri. Kana uri murume hwisisa kuti kana mukadzi wako achiita zvisngakufadzi, unofanira kumuudza. Kana uri mukadzi murume wako achiita zvisingakufadzi, wana mukana wekumuudza kuti azive.
Kune vanoti kana vonovata vese murume nomukadzi vanopfeka zvipfekwa zvokuvata nazvo. Vanovata havo vaadaro, zvokuti pamwe ukavavhakashira unoona vachitobuda muimba yavo yokuvata vakapfeka izvi.Zvipfekwa izvi hazvibudwi pazhe nazvo asi mumba zvinokwansa kuti chero pane vaenzi munhu anoonekwa hake akazvipfeka, zvichibva nokuti zvakasonwa sei. Pane zvimwewo zvinoratidza nhengo dzomuviri zvokuti hadziiti kutiuonekwe neasiri murume/mukadzi wako.
Zviri kwamuri mese kuti munobvumirana kupinda mumubhedha makapfeka zvipfekwa, asi kune vamwe vakadzi vanofarira kuti kana voda kuvatana nomurume, murume aite EFFORT yokumubvisa hembhe. Kune vakadzi vanoona zvichiwedzera zemo kubviswa hembhhe nomurume. Vakadzi vakaddai vanopfeka zvipfekwa vasati vapinda mumubhedha nomurume. Kazhinji vakadzi vakadai vanotora nguva kutsvaka zvipfekwa zvokuvata nazvo zvinoyevedza varume kutarisa. Kuti murume anyatsoona mukadzi anopfeka, obva asiya rambhi rakatungidzwa kuti murume aone agoyevedzwa nazvo agoita zemo rokuda kutanga zvokuvatana.
Pamwezve unoona kuti mukadzi anopfeka zvibhurugwa zvisingavhari pamberi, zvinoitigwa kuti mukwanise kupindana bhurugwa risina kubviswa zvinohi CROTCHLESS Underwear. Ukatarisa pabhurugwa riri papikicha iri uchaona kuti murume anokwanisa kungopinza chombo bhurugwa riripo nokuti rakashhama pamberi. Kuripfeka kungoda kuitisa murume zemo.
Iwe kana uchisarudza, unotosarudza uchiziva kuti murume wako munhu akaita sei uye chii chaanofarira. Iyewo murume anokwanisa kutengera mukadzi wake zvipfekwa zvakadai. Zvinhu ndezvokupanana mazano mumba kuti muwirirane muchizivaa kuti uyu anofarira ichi uyu icho.
Kozoitazve vamwee vanoziva kuti iye nomurume wake havawanzi kuvatana saka anopinda mumubhedha akapfeka zvokuvata nazvo achiziva kuti nhasi nyaya yokuvatana haipo, zvichibva nokusada kwavo vese kana kuti kuchembera.
Kozitawo vamwe vanopfeka zvipfekwa kuti vasahwa chando usiku.
Varumewo vanongokwaisa kupfeka zvavo zvichibva nokuti vanhu vakaita sei, asi varume vakawanda vanoda kuita sokuti iye ndiye anofarira kuvatana nomukadzi kupfuura mukadzi kuda kwake kuvatana nomurume. Ukaverenga zvinhu zvavanokomburena nazvo unohwa vachingodemba kuti vaadzi vavo havadi kuvatana navo kakawanda. Idzi inhema hadzo asi ivo havazvizivi. Havatozivi kuti vakazi vavo vanenge vachitodembawo kuti murume haasi kuda kundivata mazuva ese.
Kupfeka hembhe kutimurume/mukadzi asakubata muvete.
Dzimwe nguva zvinoitika kuti mukazi nomurume vapokane mumba, vozoti pakunovata, kana nyaya yavo isina kugadziriswa, zvinoitika kuti umwe wavo anokwanisa kusada kuvatana noumwe wake, obva apfeka zvipfekwa kuti uya umwe asambokwanisa kuvatana naye pahope. Zvakadai zvinoitika kana uya nyakupfeka achida kuti umwe wake akumbire ruregerero nokukasira. Kupfeka zvipfekwa uku kuda kuti uone kuti agumbuka saka haachadi kuti usvike pedo naye.
Hino mazuvano kune mahovhorosi ekuvata nawo anohi Adult Footed Pyjamas, okuti kana umwe wako akapfeka, hauwani pekumubatabata napo. Ukaona murume/mukadzi akupfekera hovhorosi iyi, chitoziva kuti nyaya haina kumira mushe.
Iwe kana wakachenjera chimirira ambovata akadaro kwekanguva kanoita maminitsi gumi. Anokwanisa kunyebera kuridza magwiriri iye asina hope, nokuti zvinenge zvichitomudyawo moyo. Mumutse umuudze kuti iwe hauna hope nokuda kwezvawamuitira. Kumbira ruregerero, hazvinei kuti uri mukadzi kana murume, kumbira chete. Kana angokuudza kuti akuregerera, iwe usakasira kuda kuvatana naye. musiye akadaro musi uyu. Mangwana acho unoona ega opinda mumubhedha asina kupfeka chinhu. Chiziva kuti nyaya yapera. Chikasirawo kudzokera pazviitwa zvenguva yokuvata.
Zvinorevazve kuti musi waanokukanganisirawo akakumbira ruregerero, iwe chikasirawo kumuregerera iye kuvatana naye kuti nyaya isaendereramberi. Nyaya dzomumba hadzinetsi kugadzirisa kana mukakasira kudzigadzirisa. Mukadzinonokera munoona kanya kange kasina kana maturo katokura kuita zinyaya ziguru. Unoona murume mukuru achitadza kungokumbira ruregerero kwevhikiyese, opedzisira ava kutotarisa mahure mukadzi wake arimomumba achiti nokuti arikumurambira. Uyawo mukadzi, ngahwsise kuti ukarambira murume wako nhasi uchiti akanganisa, chiregawo kuzoti vhiki ipere uchingomupfekera zvipfekwa mumubhedha. Munhu ajaira kuvatana noumwe haafaniri kumbonyimwa.
Kana ukaona kwapera mazuva maviri murume asina kukumbira ruregerero, Mukumbire muwane nguva yokutaurirana. Kana vana vaenda kunovata movara door reimba yokugara motanga nyaya yenyu. Musada kutonga nyaya yokuvatana muri mumubhedha hazviiti, zvinoita sekuti muri kupanana Challenge, yokuti
"Ndikwire kana uchindidherera" kana kuti
"Chiramba wakadaro tione kuti uchakwigwa nani."
Kune vamwe vanhuzve vanofunga kuti kana waramba kuvata naye zvinoreva kuti wambovata noumwe munhu musi uyu. kana wakaroorana nomuhu anofunga seizvi, unofanira kugara wakakasira kugadzirisa nyaya dzokupokana, uye kusagaromurambira nokuti zvichakuomera mberi uko.
Magadzirisa nyaya yenyu mukabvumirana pakunovata chiregai kupfekerana zvipfekwa izvo zvisina musoro. Uya nyakutadzigwa ngaachitaridza kuti nyaya yapera saka ndiye anokwesva umwe wake kuti ngatiitei zvitwa. Abvumawo iwe chiratidza kuti shuwa wange wasuruvara nokushaikwa kwezvinhu. Ita nomoyo wese musi uyu. Wobva waratidzawo rudo, nokutenda kuti muri mese pauviri hwenyu. Usasiya umwe wako ane DOUBT yokuti nyaya yapera. Kana wati nyaya yapera, chirega kuzoiunza mumba vhiki inouya.
Kuti magumburana motanga zvokupfekerana hembhe pakunovata kushaya njere hako. Kupokana kwefungwa hakufaniri kuva kupokana kwemuviri. Muviri unoda kupiwa zvinogutsa muviri. Fungwa ndedzokuRHIZENA nezvefungwa. Ukagutsa muviri fungwa dzakanaka dzinowanda.
Kutadza kuvata zvakanaka.
Zvinoitika kuti kune vanhu vanoti ukangomubaya kana negokora avete anobva atopepuka ozoita nguva asingawani hope. Kana ukaroorana nomunhu wakadai munotonetsana nokuti iye akapepuka iwe uvete, anoshaya wekataura naye pamwe okumutsa. Kuseni mese munomuka makaneta zvokuti.
Vamwe vanoti kana une munu wakadai, itai zvokuvata uyu pake uyu pake kuti musamutsana usiku. Munotora mibhedha miviri moiise pamwe chete moti pakunovata motangira mumubhedha wemukadzi, movatana monakigwa, madaro momboita tunyaya makambundikirana, pedzezvo murume oenda kwake moita zvehope. Anenge asiri kure, zvokuti umwe wenyu akaita zemo usiku, anongoswedera kune umwe motoona zvokuita.
Kuvata pakasiyana kunobatsirazve kana wakaroorana nomunhu anonhuwa fodya kana kuti asingafariri kugeza mazino, kana kuti anobudisa mweya avete, zvingava zvinokushaisa hope.
Vanoridza magwiriri vanonetsa kagadzirisa nokuti vanoita ruzha gwakawanda zvokuti chero uri kure unozvihwa. Ndichataura nenyaya dzemagwiriri.
Munhu asingavati zvakanaka anokwanisa kuita hasha kana kutadza kuita zvinhu zvaanofanira kuita. Ona kuti umwe wako ari kuvata zvakanaka. Kugeza nemvura inodziya kupfuura muviri kunobatsira hope asi unofanira kuzviita mava kunovata zvokuti unongobva pakugeza uchinanga kunovata. Chinhuzve chakanaka kuvarume nokuti zvinobatsira pakunonoka kudiridzira mukakadzi pakuvatana. Iri ngari yokuti muviri wakareruka .
Kuvata musina kupfeka zvachose.
Mhomho yakawanda vanovata vasina chavakapfeka, vese murume nomukadzi. Zvikuru vechidiki vanoziva kuti pakunovata chinhu chaunongoenda nacho itawero rokupukutisa. Hapana chimwe. Kazhinji mese munenge muchitoziva kuti pakunovata muchatombovatana chete musati maita hope. Kana muchangoroorana munokwanisa kuita makore anosvika mashanu kana kupfuura muchivatana kaviri kana katatu pazuva. Usiku futi munomukirana movatanazve. Saka nyaya yokupfeka zvipfekwa inenge isingashandi pakadai.
Unongoti ukabva kunogeza wonovata wakadaro. Kana usiku paya chombo chomurume chinongomira chega kanoita kasere kana kupfuura (men have nocturnal erections eight or more times each night) iye avete, zvokuti kana muvete unokwanisa kupepuka uchihwa kugogonegwa nechombo kumagaro, iye muridzi avete hope chaidzo. Ukada hako unongosimudzira gumbo wogonya zvishoma womubata chombo woruramisa, chopinda iwe zii zvako, unohwa murume ototanga kukoira avete. Kuzotiwo pepu mopedzisa henyu.
Murumewo akapepuswa nokumira kwechombo mukadzi avete, Zvinonzi vakadzi vakawanda pakufakanyika nokuchinja mavatira pava kwahi tinotanga nokusimudza gumbo nokuriisa kuseri kwemurume zvokuti murume anokwanisa kupinza mukadzi ari kuhope. Vakadzi vakawandisa vanorhojewa vari kuhope vachizozviona mangwanani kuti zvidya zvakaomera urume. Ndofunga tese tinoziva nyaya iyi. Kusamutswa nekuiswa hazvirevi kuti hakunaki asi kuti unenge wakarerusa muviri kuhope zvokuti pamwe unotorota uchiiswa izvo uri kutoiswa zveshuwa.
Murume anomisa chombo avete. mukadziwo anonyorova avete zvokuti usiku anenge akanyorova saka murume anomupinza chombo ari kuhope zvisingagwadzi..
Ndiwo maitire evachangoroorana. Mese munenge muchifarira kuvatana. Kozoti mava kujairana nokukura moderedza, zvichibva pakuwanda kwemabasa emumba uye kuneta.
Kuvata musina hembhe kwananakirazve kuti munoongororana miviri yenyu nokozivana zvese. Kwahi Adamu na Eva vange vasina hembhe nguva yakareba chose uye vaiva nomufaro. Kwakangozotiwo vadya muchero ndokuzotanga kupfeka mazhizha emiti, asi zvange zvisina kufanana. Upenyu hwaiva nani vasina kupfeka.
Kana mune vana vadiki, unoona kuti mwana anongopepuka pakati peusiku obva auya kuvabereki opinda mumubhedha wenyu muvete. Kazhinji anongopinda pakati penyu otovata. Hachisi chinhu chakaipa kuti mwana avate nevabereki vake asi onai kuti mwana haaratidzwi muviri yevabereki vasina kupfeka, zvikuru kana ava nemakore anopfura matatu. Kana zvichinetsa kuti mwana avate kwake oga, sokuti pamwe anogwara, gadzirirai avate pedo nemi asi ari pake oga. Kana achidziya muviri mukamurega achivata pakati penyu anotowedzera kudziya muviri.
Apa ndataura nyaya dzezvokuita pakunovata kana muchigara mese makaroorana mukadzi nomurume. Vamwe vanovata vakapfeka hembhe,
Vamwe vanongopfeka kuitira kuti vapanane zemo,
Vamwezve vanopfeka kuti vasawana zemo.
Vamwewo vanovata vasina chavakapfeka, voita sharaude pakuvatana.
Vamwezve vanovata nevana vavo mumubhedha umwe chete vopfeka kuti vana vasasangana nezvinhu zvevakuru.
Iwe nomukadzi/murume wako hwisisai kuti chamunopfekera zvinhu pakunovata chii uye zvakatanga sei uye ndizvo zvinodawoo umwe wako here? kana zvisizvo, chimbofeyafeya uhwe kuti anofarira chii, ugozamawo kumuitira.
Posted by Mai E Chibwe at 04:06